Ubuntu, fantaro ny zava-drehetra momba ity rafitra fiasa maimaimpoana miorina amin'ny Linux | Ubunlog (Pejy 11)
Mandefasa Firefox, mandefasa rakitra lehibe manimba tena
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny serivisy vaovao Mozilla antsoina hoe send. Izany dia hanome antsika ny fahaizana mandefa rakitra hatramin'ny 1GB.
Misy Ubuntu 16.04.3 LTS izao, ny fanavaozana lehibe farany an'ny kinova LTS
Navoaka ny kinova fikolokoloana fahatelo an'ny Ubuntu LTS, izany hoe, Ubuntu 16.04.3, kinova manavao ny fizarana ny rindrambaiko miorina farany
Ring, fiarovana ary fiainana manokana amin'ny resaka ataonao
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny sehatry ny fifandraisana Ring isika. Manome lanja manokana ny fanatsarana ny fiainana manokana sy filaminana.
Ubuntu 17.10 dia hanova ny fanaraha-maso ny varavarankely
Ny kinova Ubuntu vaovao, Ubuntu 17.10 dia hanova ny fanaraha-maso ny varavarankely. Hahatonga ny bokotra maivana sy manakaiky hanova ny toerana ...
RTV (Reddit Terminal Viewer), zahao i Reddit avy ao amin'ny console
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery RTV (Reddit Terminal Viewer) isika. Ity dia mpanjifa console izay ahafahantsika mivezivezy any Reddit.
Ahoana ny fametrahana LibreOffice 5.4 amin'ny Ubuntu 17.04
Fampianarana kely momba ny fametrahana ny kinova LibreOffice 5.4 tato ho ato ao amin'ny Ubuntu. Amin'ity tranga ity ao amin'ny kinova farany miorina amin'ny Ubuntu ...
Harmony, henoy ny mozikanao na aiza na aiza
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Harmony isika. Ity dia mpilalao mozika ahafahanao mitendry ny mozikan'ny serivisinao amin'ny Internet
Raiso ireo sary vaovaon'i Ubuntu Budgie 17.10 vaovao
Ubuntu Budgie sy ny vondrom-piarahamoniny dia namorona fifaninanana hisafidianana ireo wallpaper na sary vaovao ho an'ny kinova manaraka ary ireo no mpandresy
Miaraha miasa amin'ireo rakitra PDF sy DjVu miaraka amin'ny Gscan2pdf 1.8.4 amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery gscan2pdf isika. Ity programa ity dia hahafahantsika miasa amin'ny rakitra .pdf sy DjVus amin'ny fomba tsotra ao amin'ny Ubuntu.
Ubuntu Budgie 17.10, kinova tsy hiankina amin'ny Gnome
Ny alpha faharoa an'ny Ubuntu Budgie 17.10 dia efa azon'ny rehetra izao. Ny kinova vaovao dia mampiseho amintsika vaovao momba ny tsiro Ubuntu ofisialy vaovao ...
OpenToonz Animation Maker, mamorona sary mihetsika 2D avy any Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery OpenToonz isika. Ity dia programa iray ahafahantsika manao sary mihetsika 2D avy amin'ny Ubuntu.
Pop! _OS, ny fizarana System76 vaovao dia hampiasa ny Ubuntu 17.10 ho toy ny fototra
Miroso amin'ny fizarana Pop! _OS ny System76. Ny fizarana vaovao dia hiorina amin'ny Ubuntu 17.10 sy Elementary OS, hanamorana ny fampiasan'ny mpampiasa ...
mtPaint, mpamoaka sary ho an'ny sary maivana amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny mtPaint isika. Mpanonta sary ho an'ny sary maivana mitovy amin'ny Windows Paint ity.
Electron sy Nativefier hamorona tranonkala web anao manokana avy any Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery Electron isika. Ity dia lamina iray izay hiarahan'ny nativefier hamorona antsika webapp manokana.
Misy izao ny alpha faharoa an'ny Ubuntu MATE 17.10
Ny alpha faharoa an'ny Ubuntu MATE 17.10 dia misy ankehitriny, kinova fampandrosoana iray izay mampiseho amintsika ny vaovao hoentin'ny kinova Ubuntu MATE
jEdit, mpamoaka lahatsoratra an-tsoratra maimaimpoana ho an'ireo mpandahatra fandaharana Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery jEdit isika. Ity dia tonian-dahatsoratra misy endri-javatra mahaliana hanatanterahana ny asa fandaharana.
WeChat, ny mpanjifan'ny elektron'ity chat ho an'ny Ubuntu ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny rindrambaiko elektronika WeChat izahay. Afaka mankafy an'ity fampiharana ity avy amin'ny Ubuntu izahay.
Ampidiro Corebird 1.5.1, mpanjifa Twitter matanjaka be ao amin'ny Ubuntu
Corebird, mpanjifa matanjaka manana endrika tsara sy intuitive, tena feno izay manana ny toetra ilaina, ny famakiana ny ...
Wavebox, mpanjifa mailaka ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny mpanjifa mailaka Wavebox isika. Miaraka aminy isika afaka miasa amin'ny hafainganam-pandeha amin'ny google.
Nangataka tamin'ny mpampiasa azy ihany koa ny Ubuntu MATE hoe inona avy ireo programa tokony ho ao anaty tsiro ofisialy
Nanapa-kevitra ihany koa ny Ubuntu MATE hanontany ireo mpampiasa azy hoe inona ny programa tokony hampiasa na hapetraka amin'ny fizarana, noho izany dia nangataka ny mpilalao horonantsary izy
Firefox 55 no ho endriny haingana indrindra, saingy amin'ny Ubuntu 17.10 ve izy io?
Mozilla Firefox 55 dia havoaka amin'ny faran'ny volana aogositra, kinova iray amin'ny browser web izay mampanantena fa ho haingana indrindra hatreto na toa ...
Qt 5.9.1, (miaraka amin'ny Qt Creator 4.3.1 tafiditra) fametrahana ao amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny Qt version 5.9.1 isika. Ity fonosana ity dia misy ny QtCreator IDE azontsika ampiasaina amin'ny rafitra Ubuntu.
Ubuntu 17.10 dia ho kinova Ubuntu tsy miankina
Ny lohan'ny birao, Will Cooke, dia nanolotra tatitra momba ny fanovana natao tamin'ny fampandrosoana ny ubuntu 17.10, ny fanovana izay hanatsara ny Ubuntu ...
CodeBlocks, IDE feno ho an'ireo mpamorona C ++ ao amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery CodeBlocks isika. Miaraka amin'ity IDE maivana sy lava azo alaina miaraka amin'ny plugins ity dia afaka mampivelatra kaody C ++ ianao.
Ny kinova farany an'ny Brackets dia misy fampifanarahana bebe kokoa amin'ny menio manerantany
Ny brackets dia manana kinova vaovao izay mahatonga azy hifanaraka kokoa amin'ny menus eran'izao tontolo izao nefa koa mitondra vaovao mahaliana hafa amin'ny fiasana amin'ny Internet
Plex Media Server, fametrahana amin'ny alàlan'ny snap amin'ny Ubuntu sy ny derivatives
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery Plex isika, ity dia mpizara haino aman-jery iray izay azontsika apetraka amin'ny alàlan'ny fonosana snap ao Ubuntu sy ireo derivatives.
WebCatalog, katalaogin'ny fampiharana an-tranonkala lehibe ho an'ny birao
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery WebCatalog isika. Ity rindranasa ity dia manolotra katalaogin-tranonkala ho anay izay mihazakazaka avy amin'ny birao.
Ubuntu te hahafantatra izay rindranasa hampiasainao amin'ny Ubuntu 18.04
Ubuntu dia te hanana fizarana mahasoa ho an'ireo mpampiasa azy. Izy io dia manazava ny lafiny toa ny rindranasa ampiasainay ary hanova izany ho an'ny Ubuntu 18.04 ...
GitKraken 2.7, git client namboarina niaraka tamin'ny elektron ho an'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery GitKraken isika. Ity dia mpanjifa git vita amin'ny elektron ho an'ny Ubuntu (x64).
Tsy manana fanohanana ofisialy intsony ny Ubuntu 16.10
Ubuntu 16.10 dia tsy zaka amin'ny fomba ofisialy intsony. Ilay kinova navoaka tamin'ny Oktobra lasa teo dia tsy hanana fanavaozana intsony fa hitohy hiasa
MPV, mpilalao horonantsary ho an'ny terminal
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny mpilalao horonantsary ho an'ny terminal MPV isika. Ho hitantsika ny fomba fametrahana sy famongorana azy amin'ny fomba tsotra ao amin'ny Ubuntu.
Ahoana ny fametrahana SASS amin'ny Ubuntu 17.04
Miresaka lesona kely iray izahay hahafahana mametraka SASS ao amin'ny Ubuntu 17.04. Fomba tsotra iray hananana ity preprocessor CSS ao amin'ny Ubuntu ...
AnimationMaker, mamorona horonantsary fampisehoana avy amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery AnimationMaker isika. Izy io dia fampiharana izay ahafahantsika mamorona horonantsary fampisehoana mora foana amin'ny Ubuntu.
Ny App Skype Vaovao dia mitondra antso an-tarika ho an'i Ubuntu
Ny fampiharana Skype dia mbola miasa ho an'ny Ubuntu. Ny kinova vaovao dia misy fiasa vaovao toy ny fiantsoana horonantsary vondrona ...
RSS Guard 3.4.1, famahanana mpamaky amin'ny fampiasa vaovao
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana RSS Guard. Ity dia mpamaky fahana maivana sy mora ampiasaina amin'ny Ubuntu sy Linux Mint.
DigiKam 5, Digital Photo Management ao amin'ny Ubuntu / Linux Mint
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery DigiKam 5. Mpitantana sary nomerika miasa tsara amin'ny Ubuntu sy Linux Mint isika.
Gnome dia hahatonga ny fonosana snap ho kely kokoa ary hiasa bebe kokoa
Ubuntu dia manohy miasa amin'ny fonosana haingana. Tonga ao amin'ny birao Gnome ireo fonosana ireo. Birao izay azo apetraka amin'ny snap packages ...
Ubuntu Artful Aadvark dia mila ny Community
Ubuntu Artful Aadvark no ho endriny lehibe manaraka an'ny Ubuntu. Dika iray izay misy fanovana maro fa tsy misy backup ihany ...
Texmaker 5.0, mpamoaka lahatsoratra LaTeX miaraka amin'ny mpijery PDF ao amin'ny Ubuntu 17.04
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hijery an'i Texmaker isika. Mpanonta LaTex miaraka amin'ny mpijery PDF azontsika ampiasaina amin'ny Ubuntu 17.04 na avo kokoa.
Ahoana ny fametrahana MongoDB amin'ny Ubuntu
Lazainay aminao ny fomba fametrahana MongoDB ao amin'ny Ubuntu LTS anay, database iray mahery sy mahasoa izay afaka manolo ny hafa toa ny MySQL na MariaDB ...
Nautilus-svgresize, ovao ny haben'ny sary SVG ao amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita script antsoina hoe svgresize isika ahafahantsika manova ny haben'ny sary .svg nefa tsy misy ezaka.
Ireto ny sasany amin'ireo vaovao hananan'i Ubuntu Budgie 17.10
Ikey Doherty dia niresaka momba ireo fiasa vaovao ao amin'ny Budgie Desktop, endrika vaovao izay ho tafiditra ao amin'ny Ubuntu Budgie 17.10, tsiro ofisialy vaovao ...
LIVES 2.8.7, mpamoaka horonantsary tsotra nefa mahery ho an'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana LIVES Video Editor 2.8.7 ao amin'ny Ubuntu. Ity dia fampiharana fanovana tsotra nefa mahery.
Ny fork voalohany an'ny Unity 8 dia azo alaina ao amin'ny Ubuntu 16.04
Yunit, ilay fork voalohany an'ny Unity 8, dia efa azo ampiasaina sy hapetraka ao amin'ny Ubuntu, fa tsy amin'ny Kubuntu na Ubuntu MATE, noho ireo tranomboky taloha.
GNS3, simulator tambajotra tena izy sy virtoaly ho an'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny fampiharana iray antsoina hoe GNS3 isika. Amin'izany ianao dia afaka mamorona topolojia tambajotra hizaha toetra ny Ubuntu.
Canonical dia manambara ny fizarana azy amin'ny Kubernetes 1.7
Canonical dia nanavao ny fizarana azy amin'ny Kubernetes. Kubernetes 1.7 dia efa ao anatin'ity fizarana ity ho an'ny mpizara sy mpamorona ...
Syncthing, ampifanaraho amin'ny fomba tsotra ny fitaovana
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery Syncthing isika. Amin'ity programa ity dia ho azonao atao ny mampifandray ireo rakitra eo anelanelan'ny solosaina maro amin'ny tambajotra iray ihany.
Ahenao ny sary, script Nautilus hampihenana ny haben'ny sarinao
Amin'ity lahatsoratra ity isika dia hahita script ho an'i Nautilus antsoina hoe mampihena ny sary izay manome antsika ny asa hampihenana ny haben'ny png sy ny jpg sary.
Ubuntu dia azo alaina ao amin'ny Microsoft Store
Microsoft dia efa nanao ny sary Ubuntu ho azon'ny rehetra ao amin'ny Microsoft Store. Ity sary ity dia mametraka ny subsystem Ubuntu amin'ny Windows 10 ...
Linux AIO Ubuntu 17.04, sary iso hifehy azy rehetra
Linux AIO Ubuntu 17.04 dia sary ISO vaovao amin'ilay tetikasa izay manome antsika ny fahafahan'ny Ubuntu farany tsy manova ny sary fametrahana.
SimpleNote 1.0.8, apetraho toy ny .deb na snap amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny SimpleNote 1.0.8 isika ary ny fomba fametrahana azy amin'ny rakitra .deb na ho fonosana haingana ho an'ny Ubuntu.
WeeChat, mpanjifa IRC avy amin'ny tsipika baiko
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery WeeChat isika. Ity dia mpanjifa iray hafa ho an'ny IRC fa ho antsika izay tia ny laharan'ny baiko Ubuntu.
Curlew Multimedia Converter, fametrahana avy amin'ny PPA ao Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana ny mpanova haino aman-jery mahery antsoina hoe Curlew, izay ahafahanao manova ny horonan-tsarinao ho endrika hafa.
Ubuntu 17.10 dia hihemotra amin'ny Skype
Ubuntu 17.10 dia hanana fiasa vaovao. Anisan'ireo zava-baovao ireo ny fahanginan'ny feo tanteraka rehefa mandray antso VoIP isika, saingy amin'ny Skype dia tsy ho toy izany
Discover dia afaka hametraka fampiharana amin'ny endrika snap
Ireo mpikirakira Ubuntu sy KDE dia nanamafy ny asa izay ataon'izy ireo hanaovana Discover, ivon-rindrambaiko KDE, mifanaraka amin'ny snap ...
Mpamadika sary haingana, fanovana anarana hafa amin'ny sary sy horonan-tsary
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fampiharana Rapid Photo Downloader, izay ahafahantsika mamerina manome anarana ny sary sy ny horonan-tsary avy amin'ny Ubuntu.
Lmms, toeram-piasana audio nomerika ao amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity isika dia hahita toeram-piasana audio nomerika ho an'ny Ubuntu sy ireo rafitra miasa hafa antsoina hoe Lmms.
Stellarium, apetraho avy amin'ny PPA ao amin'ny Ubuntu ity planetarium ity
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana Stellarium. Izy io dia planetaary manana fahafaha-manao lehibe ho an'ny rafitra fiasa Ubuntu.
LinuxMint 18.2, endrika vaovao izay miaraka amin'ny tsiro ofisialy rehetra
Misy izao ny kinova LinuxMint, LinuxMint 18.2 vaovao, kinova iray izay miaraka amin'ny tsiro ofisialy rehetra, zavatra izay tsy mitranga matetika ...
Bluefish, mpamoaka kaody haingam-pandeha sy maivana ho an'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana Bluefish amin'ny Ubuntu. Ity rindrambaiko ity dia mpamoaka kaody maivana sy mahery hanamboarana kaody.
Mpamaky RSS Feedreader, fametrahana ao amin'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny fonosana flatpak
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana ny tsimbadika farany an'ny mpamaky rss Feedreader ao amin'ny rafitray Ubuntu amin'ny alàlan'ny fonosana flatpak.
Googler, fitaovana zotram-baiko hikarohana an'i Google
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fitaovana Googler. Izy io dia fampiharana izay ahafahantsika mikaroka ao amin'ny Google avy amin'ny terminal.
Software Boutique, fivarotana fampiharana vaovao ho an'ny Ubuntu MATE
Ubuntu MATE dia hanana mpitantana lozisialy vaovao. Ity rindrambaiko ity dia antsoina hoe Boutique Software. Ity fampiharana ity dia hanana fampiasa vaovao mahafinaritra ...
Wireshark, manara-maso ny fivezivezena amin'ny tambajotra
Lahatsoratra izay hahitantsika ny fomba fametrahana ny kinova 2.2.6 na 2.2.7 an'ny Wireshark. Amin'ity fampiharana ity dia azonao atao ny manara-maso ny fivezivezena amin'ny tambajotra.
Ubuntu MATE dia hanana MIR ihany amin'ny farany
Ny mpikirakira Ubuntu MATE dia nanamafy ny ho avin'ny MIR amin'ny alàlan'ny fampiasana azy amin'ny tsiro ofisialy azy ary tsy mampiasa Wayland ho mpizara sary ...
Lumina 1.3, kinova vaovao amin'ity birao tsy fantatra ity
Lumina 1.3 no santionany farany amin'ny birao maivana sy tsy fantatra izay ananantsika ho an'ny Ubuntu, birao izay mampiasa QT Library ...
Timekpr-Revived 0.3.6, fifehezana ny fampiasana ho an'ny ekipanay
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia ho hitantsika ny programa antsoina hoe Timekpr-Revived hanampiana fifehezana ny fampiasana ny kaontin'ny mpampiasa ny rafitra Ubuntu.
KeePassXC dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny fonosana haingana
KeePassXC, ilay rindrambaiko fitahirizana tenimiafina malaza, dia efa ao anaty format snap hapetraka amin'ny alàlan'ity fonosana iraisana ity ...
Tabataba ambient (ANoise) ho an'ny Ubuntu 16.04 sy ambony
Amin'ity lahatsoratra ity isika dia hahita programa iray izay hanampy antsika hifantoka na hiala sasatra. Ity i ANoise, izay hapetrakay mora foana amin'ny Ubuntu.
Ny Unity 7 dia misy amin'ny kinova isan'andro an'ny Ubuntu 17.10
Ny biraon'ny Unity 7 dia azo alaina ao amin'ny sary dev 17.10. Miaraka amin'ity fork ity, ny Ubuntu dia nanisy fanatsarana ny snapd ...
Ubuntu Cleaner, fitaovana iray hanadiovana ny Ubuntu
Ubuntu Cleaner dia fitaovana ahafahantsika manadio ny rafitra fiasanay amin'ireo rakitra tsy ilaina sy rakitra maloto ao amin'ny magazain'i Ubuntu
Ny mpizahatany Vivaldi 1.10 dia mamela ny fanamboarana ny pejy fandraisana ao Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny kinova vaovao an'ny Vivaldi 1.10 mpitety izay ahafahantsika manamboatra ny pejy fandraisana.
Ubuntu 17.10 miaraka amin'ny GNOME dia hanana fanohanana fampirimana an-trano voaroaka
System76 dia hanampy fanampiana amin'ny famoahana encrypt ny folder Home ao amin'ny tontolon'ny birao GNOME ho an'ny rafitra fiasa Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark) ho avy.
Netplan dia nahatratra ireo trano fitahirizana ny rafitra Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark) ho toy ny fomba fanamboarana default ho an'ny tambajotra.
Netplan dia tetik'asa Ubuntu izay hampiharina sy hampiasaina amin'ny default amin'ny Ubuntu 17.10 hitantanana ny tambajotra sy ny fampiharana ny solosaina ...
Tilix sy Guake misy amin'ny PPA ho an'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita emulator terminal roa ho an'ny Ubuntu isika. Momba an'i Tilix sy Guake no hanolotra antsika fiasa marobe.
Fanitarana Gnome Shell: ny tena hoavin'ny firaisana?
Ubuntu dia mbola miasa amin'ny extensions ho an'ny Gnome, izay manondro fa ny fiovana avy amin'ny Ubuntu mankany amin'ny birao, fa tena hahomby ve?
Lokon'ny fampirimana, ovao ny lokon'ny lahatahiry ao amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fanovana ny lokon'ny lahatahiry ao amin'ny Ubuntu amin'ny fampiasana fampiharana antsoina hoe Folder color. Haingana sy mora ampiasaina.
Ny fanafainganana GPU dia ho tsy misy toerana ao amin'ny Ubuntu 17.10
Ny filalaovana horonantsary amin'ny alàlan'ny fanafainganana fitaovana dia tonga hatrany amin'ny Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark), araka ny Canonical.
Ny Plasma 5.10 dia tonga ao amin'ny Kubuntu 17.04 noho ireo seranam-piaramanidina
Ny Plasma 5.10 dia tonga tao amin'ny Kubuntu 17.04 ihany koa, kinova nohavaozina miaraka amina bibikely namboarina noho ireo trano fitahirizana backports ...
WoeUSB, mamorona USB bootable miaraka amin'ny Windows avy amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fampiharana WoeUSB. Amin'izany no ahafahantsika mamorona USB bootable miaraka amin'ny rafitra Windows noforonina avy amin'ny Ubuntu tamin'ny fomba tsotra.
Ubuntu 17.10 dia hitondra fanatsarana ho an'ny boot Windows amin'ny GRUB
Ny mpamorona Ubuntu 17.10 dia namoaka fampiasa amin'ny rafitra fiasa vaovao, ao anatin'izany ny fanatsarana ny fanohanana ny fanombohana Windows.
Mametraha Steam amin'ny Ubuntu 17.04 amin'ny fampiasana fonosana flatpak
Steam no sehatra lalao video tsara indrindra any Ubuntu. Lazainay aminao ny fomba fametrahana mpanjifa noho ny endrika flatpak ...
WPS Office for Linux 2016 no kinova vaovao ho an'ireo mpampiasa azy, kinova izay mitondra vaovao mahaliana toy ny fahatongavan'ireo serivisy rahona ...
Ampidiro ny kinova fikolokoloana fahadimy an'ny Kernel 4.11 ao amin'ny Ubuntu 17.04
Navoaka omaly ny kinova 4.11.5, izay ny kinova fikolokoloana fahadimy an'ny Linux Kernel 4.11, fanavaozana ity
Keepass, apetraho amin'ny Ubuntu ity mpitantana teny miafina mahafinaritra ity
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ao amin'ny Keepass Password Manager isika. Mpandrindra tenimiafina Ubuntu tena azo antoka.
Mutt, mpanjifa mailaka haingana be ho an'ny terminal
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana sy fikirakira Mutt. Mpanjifa mailaka ho an'ny terminal an'ny Ubuntu na OS hafa
Firefox 54 dia misy ary haingana kokoa noho ny hatramin'izay
Firefox 54 izao dia azo zahana amin'ny olona rehetra miaraka amin'ny fanovana ny lafiny hafainganam-pandeha sy ny fitehirizana loharanom-pahalalana saingy tsy mazava izany fa ny mpizaha Ubuntu ...
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia mampahafantatra anao ny PDFSAM izahay. Rindrambaiko mahafinaritra ahafahanao mitantana ny rakitra PDF anao mora foana.
Vectr dia fampiharana fanovana sy famoronana sary vector izay azonay ampiasaina amin'ny sehatra tsy misy loharanom-bola firy noho ny fikafika ...
Krita 3.1.4, mamorona sary hosodoko mahatalanjona avy any Ubuntu
Andao hiresaka momba an'i Krita 3.1.4. Mpamorona sary hosodoko ahafahanao mahazo sary matihanina amin'ny Ubuntu.
Cura 2.5, fanontana 3D avy amin'ny Ubuntu 16.04
Lahatsoratra izay ahitantsika an'i Cura. Ity rindrambaiko ity dia hahafahantsika manonta ireo maodelinay amin'ny mpanonta 3D izay ananantsika avy amin'ny Ubuntu 16.04.
Ireo mpandrafitra Ubuntu dia manandrana Wayland amin'ny PC misy sary avy amin'ny AMD, Nvidia ary Intel
Canonical dia mihazakazaka fitsapana amin'ny solosaina maro miaraka amina karatra sary avy any Intel, AMD ary Nvidia hitsapana ny fanohanana an'i Wayland.
Ampidiro ny ScreenFetch 3.8.0 amin'ny Ubuntu 17.04 Zesty Zapus
Voalohany indrindra, ho an'ireo izay mbola tsy mahalala ScreenFetch, azoko lazaina aminao fa script bash izay mikaroka sy mampiseho fampahalalana momba ny Hardware-nay.
Ny KDE Connect dia hiasa amin'ny fifandraisana Bluetooth ihany koa
Mitohy mivoatra ny KDE Connect. Amin'ity tranga ity, nampidirina ny fifandraisana vaovao sy ny fiasa vaovao izay amin'ny kinova miorina amin'ny ho avy dia hanana ...
DiffPDF, ampitahao ireo rakitra PDF avy amin'ny birao Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity isika dia hahita fampiharana antsoina hoe DiffPDF izay ahafahantsika mampitaha ireo rakitra PDF avy amin'ny birao Ubuntu.
Scribus 1.5.3, amboary ny publication avy amin'ny Ubuntu
Andininy izay hahitantsika ny fomba fametrahana Scribus 1.5.3 ao amin'ny Ubuntu, izay ahafahantsika mamorona ny kisary amin'ny fanontana avy amin'ny birao.
Katoolin, apetraho amin'ny Ubuntu ireo fitaovana Kali Linux rehetra
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana fitaovana Kali Linux ho an'ny fanaraha-maso tambajotra ao Ubuntu amin'ny fampiasana ny script Katoolin.
Ahoana ny fanovana na fametrahana lohahevitra birao ao amin'ny Ubuntu Budgie
Fetsy kely amin'ny fomba fanamboarana ny Ubuntu Budgie. Amin'ity tranga ity dia ho hitantsika ny fomba fanovana na fametrahana lohahevitra birao vaovao ao amin'ny Budgie Desktop
Nutty dia hanome anao fampahalalana momba ny tamba-jotra sy ny fitaovana mifandray
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny programa Nutty. Amin'izany no ahafahantsika manara-maso ny tamba-jotra eo an-toerana avy amin'ny solosaina Ubuntu.
Ampiasao Google Drive amin'ny Lubuntu anao
Torolàlana kely momba ny fomba fametrahana sy fampiasana OverGrive ao amin'ny Lubuntu hananana sy hiasa amin'ny Google Drive sy ny serivisy ...
Chirp, mpanjifa elektronika ao amin'ny Twitter
Amin'ity fampianarana ity dia hahita mpanjifa Twitter noforonina niaraka tamin'ny Electron antsoina hoe Chirp izahay ary afaka mampiasa ao amin'ny Ubuntu.
Ubuntu dia manomboka ny fifindrana mankany amin'ny Gnome Shell amin'ny fivoarany
Efa misy ny sary ofisialy fa ny fivoaran'ny Ubuntu 17.10 miaraka amin'i Gnome Shell ho birao misy anao. Na izany aza tsy manana Wayland ireo sary ireo ...
Ampidiro ny BeeBeep 4.0 Secure Lan Messenger amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita ny BeeBeep isika. Ity dia tambajotra Chat for Lan ahafahantsika mifandray amin'ireo ekipanay eo an-toerana sy hizara rakitra.
Afaka manana dock multi-windows ianao izao noho ny Gnome's Dash to Dock
Dash to Dock, ny fanitarana Gnome Shell, dia efa mamela ny famerenam-bidy amin'ny efijery, amin'ny fomba ahafahan'ny mpampiasa manana dock isaky ny efijery ampiasainy ...
Ampidiro ny Aptana Studio 3 amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana Aptana Studio 3 amin'ny kinova Ubuntu. Miaraka aminy no ahafahantsika manao fandaharana amin'ny fiteny samihafa.
Tonga any amin'ny minipc i Kodi noho ny fonosana haingana
Fampisehoana malaza hatrany hatrany hatrany no tonga amin'ilay endrika snap. Iray amin'ireo fandaharana ireo ny Kodi, izay efa ao anaty snap format ho an'ny rehetra ...
Ahoana ny fomba hanaovana GNOME Shell hitovy tanteraka amin'ny Unity 7
Raha mampiasa Ubuntu ianao dia hazavainay ny fomba hahatonga ny GNOME Shell ho toy ny Unity 7 amin'ny fampiasana lohahevitra vaovao novolavolain'i b00merang.
Bodhi Linux 4.2 dia misy izao; ny kinova voalohany izay tsy hanana fanohanana 32-bit
Bodhi Linux 4.2 dia misy izao. Ity kinova vaovao amin'ny fizarana izay mampiasa E17 sy Moksha ity ho toy ny birao lehibe dia mitondra kernel vaovao sy zavatra hafa
Vonoy ny fizotrany ary mahazoa fampahalalana momba ny rafitra ao amin'ny terminal
Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita baiko terminal vitsivitsy ahafahantsika mamono ny fizotrany sy manamarina ny mombamomba ny rafitra ao amin'ny Ubuntu.
EncryptPad, mpamoaka lahatsoratra ciphertext an'ny Gnu / Linux
Fampianarana hametrahana ny tonian-dahatsoratra ciphertext EncryptPad ao amin'ny Ubuntu. Miaraka aminy isika dia afaka mitazona ny antontan-taratasintsika ho voaro amin'ny mason'ny maso.
Nampihena ny fahalemen'ny Sudo amin'ireo kinova Ubuntu tohanan'ny rehetra
Canonical dia nametaka ny fahalemen'ny Sudo tato ho ato (isa CVE-2017-1000367) amin'ny kinova Ubuntu tohana rehetra.
Ahoana ny fametrahana PlayOnLinux amin'ny Zesty Zapus 17.04
PlayOnLinux dia rindrambaiko Maimaimpoana ary noho izany dia loharano misokatra, miorina amin'ny divay ary natao hahafahana mihazakazaka lalao natao ho an'ny Windows.
Ampidiro ary ampifanaraho ny Java amin'ny Ubuntu 17.04 Zesty Zapus
Amin'izao fotoana izao ny kinova Java natolotra dia 8 amin'ny fanavaozana 131, izay hifantohantsika. Mametraka Java amin'ny Ubuntu 17.04.
Ahoana ny fametrahana Atom amin'ny Ubuntu
Atom dia tonian-dahatsoratry ny kaody malaza sy matanjaka izay mamela antsika hamorona programa sy rindranay manokana. Atorinay anao ny fomba fametrahana Atom amin'ny Ubuntu
Ramme, mpanjifa birao ho an'ny Instagram
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia mampahafantatra anao an'i Ramme izahay. Mpanjifa ho an'ny Instagram izay ahafahantsika manavao sy mampakatra sary ao amin'ny mombamomba anay amin'ny birao.
Ahoana ny fomba hamoronana bokotra fanakatonana ho an'ny dock-tsika
Fampianarana kely momba ny fomba fampidirana ny bokotra fanakatonana ao amin'ny Plank anay, ilay dock malaza sy maivana indrindra misy an'ny Ubuntu ...
Cumulus, fomba iray hafa hahitana ny fotoana ao amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba hametrahana kinova Cumulus roa samihafa hahafahana mahita ny fotoana eo amin'ny birao Ubuntu
KVM, hanafainganana ny emulator Android Studio ao amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana KVM mba hanafainganana ny emulator omen'ny Android Studio ao amin'ny Ubuntu.
Luminance, miasa sary HDR avy any Ubuntu
Miaraka amin'ny Luminance HDR afaka miasa mora amin'ny sary HDR ianao (sehatra avo lenta) avy amin'ny rafitra fiasa Ubuntu.
Ny fananganana isan'andro Lubuntu voalohany dia miseho miaraka amin'ny LXQT
Simon Quigley dia nanambara ny fahatongavan'i LXQT tany Lubuntu ary efa misy sary isan'andro an'ny kinova Lubuntu manaraka miaraka amin'i LXQT ho birao misy anao.
OpenExpo, foibe rindrambaiko Maimaimpoana lehibe (sy Open Source ary Open World Economy) any Espana, dia hatao amin'ny 1 Jona
OpenExpo dia hatao amin'ny 1 Jona any Madrid. Ny fampirantiana Rindrambaiko Maimaimpoana lehibe indrindra eto amin'ny firenena dia hiaraka amin'ny orinasa 200 La N @ ave ...
Ahoana ny fametrahana Android Studio amin'ny Ubuntu 17.04
Lahatsoratra kely momba ny fametrahana Android Studio amin'ny Ubuntu 17.04. Google IDE hamoronana fampiharana Android azontsika atao ao amin'ny Ubuntu ...
Psensor, ny interface graphique ho an'ny lm-sensor
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana psensor, ny interface graphic an'ny lm-sensor izay ahafahantsika manara-maso ny hafanan'ny fitaovana.
Mandefasa horonan-tsary mankany amin'ny Chromecast anao noho ny Mkchromecast an'ny Ubuntu
Mkchromecast dia rindrambaiko iray ho an'ny Ubuntu izay mampifandray ny birao misy anay sy ny fitaovana Chromecast ary mamoaka horonantsary, feo ary sary ...
Neofetch, alao ny angona fototra momba ny fametrahana Ubuntu
Lahatsoratra izay hasehonay ny fomba hahazoana ny mombamomba ny fametrahana ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny Neofetch avy amin'ny terminal
Ny Visual Studio Code izao dia ao anaty endrika haingana
Ny Visual Studio Code dia azo alaina amin'ny endrika haingana. Ny mpamoaka kaody Microsoft malaza izao dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny fonosana haingana, zavatra mora kokoa ...
Mpijery tranonkala ho an'ny terminal
Alefaso ny Ubuntu izay hampianaranay anao ny mpizaha tranonkala vitsivitsy ho an'ny terminal nefa tsy mila loharano lehibe ao amin'ny ekipanay.
Headset, avadiho ny YouTube ho Spotify tsy misy doka
Amin'ny Headset dia afaka manana ny mozika YouTube rehetra amin'ny solosainao ianao. Hanana ny Spotify anao tsy misy doka miaraka amin'ireo mozika rehetra eto an-tany ara-dalàna ianao.
Harmattan Conky, satria ny hazavana dia mety ho tsara tarehy ihany koa
Harmattan Conky dia fanaingoana ny maso ny rafitra Conky izay ahafahantsika manana Conky eo amin'ny biraontsika nefa tsy manova ny fanjifana loharanon-karena ...
Youtube-dl, ampidino ny horonan-tsary avy amin'ny terminal
Fampianarana hametrahana sy hampiasana Youtube-dl. Amin'ity programa ity dia azonao atao ny misintona horonan-tsary avy amin'ny sehatra Internet rehetra ho an'ny solosainao.
Ubuntu Core dia lasa rafitra fiasa faharoa an'ny IoT
Ubuntu Core, ny rafitra fiasan'ny Canonical ho an'ny IoT dia tonga teo amin'ny toerana faharoa teo amin'ireo rafitra fiasa ho an'ny IoT, ireo rafitra mihoatra ny Android
Geany, IDE kely ho an'ny Ubuntu
Tutorial izay hahitanao fomba roa hametrahana ny mpamoaka kaody Geany ho an'ny Ubuntu ary ahafahanao mampivelatra ny kaodinao mora foana.
Ubuntu 17.04 (Zesty Zapus) dia mahazo ny patch fiarovana voalohany ho an'ny Kernel
Taorian'ny fahitana olana ara-piarovana isan-karazany dia namoaka fanavaozana ny kernel Ubuntu 17.04 (Zesty Zapus) i Canonical.
Ubuntu koa dia manana "WannaCry" manokana. Bitsika vao tsy ela akory izay no namela ireo mpampiasa hiditra ao amin'ilay rafitra tsy misy efijery fidirana, zavatra izay efa nahitsiny
I-nex dia mampiseho amintsika ny fampahalalana momba ny fitaovana ao amin'ny fitaovantsika
Fampianarana hametrahana i-nex amin'ny Ubuntu. Amin'ity programa mahafinaritra ity dia afaka hamoaka tatitra feno momba ny fitaovan'ny fitaovantsika izahay.
Ny tontolo desktop desktop MATE 1.16.2 dia azo alaina ao amin'ny Ubuntu MATE 16.04.2 LTS
Ny tontolon'ny birao MATE 1.16.2 dia azo alaina ao amin'ny rafitra fiasa Ubuntu MATE 16.04.2 LTS. Atoro anao ny fomba hametrahana azy mora foana amin'ny PC-nao.
Plasma 5.10 dia ho avy miaraka amin'ny format snap sy ny endrika flatpak
Ny kinova beta an'ny Plasma 5.10 dia efa misy hizaha toetra azy ary hahitana izay vaovao izay hanana ny kinova manaraka amin'ny tetikasa KDE ...
Ahoana ny fametrahana Etcher ao amin'ny Ubuntu
Etcher dia rindranasa mamela antsika hamorona Bootable USB araka izay itiavantsika azy. Fitaovana azontsika apetraka ao amin'ny Ubuntu amin'ny fomba mora ...
Angry IP Scanner, fehezo ireo fitaovana mifandray amin'ny tamba-jotra
Fampianarana hametrahana Angry IP Scanner ao Ubuntu ary amin'izay dia ho afaka mifehy izay fitaovana mifandraika amin'ny tamba-jotra tsy miankina amintsika.
Jereo, mamorona gif animated ao Ubuntu
Fampianarana hametrahana Peek mora foana. Izy io dia sary gif animated niteraka an'i Ubuntu avy amin'ny fonosana na fonosana .deb.
Nandritra ny BUILD 2017, dia naseho ampahibemaso ny fahatongavan'i Ubuntu tao amin'ny Microsoft Store. Azonao atao izao ny misintona sy mametraka ny fizarana Canonical ...
Python 3.6, apetraho avy amin'ny PPA na manangona ny kaody loharano ao amin'ny Ubuntu
Fampianarana hametrahana Python 3.6 amin'ny kinova samihafa an'ny Ubuntu amin'ny fomba telo samy hafa haingana sy mora.
TeamViewer, mametraha fifandraisana lavitra amin'ireo solosaina hafa avy amin'ny Ubuntu
Tutorial izay ahitanao ireo toetra sy ny fomba fametrahana TeamViewer ao Ubuntu hahafahanao mametraka fifandraisana vaovao sy miditra amin'ny solosaina hafa
Ahoana ny fametrahana lohahevitra Gnome maromaro amin'ny baiko tokana ao amin'ny Ubuntu
Asehonay aminao ny fomba fametrahana lohahevitra Gnome mihoatra ny 20 ao amin'ny Ubuntu misy baiko tokana misy terminal sy sora-tanana kely ...
Ahoana ny fomba fampidirana sary amin'ny Instagram avy amin'ny Ubuntu
Fetsy kely amin'ny fomba fanamboarana ny tranokalanay mba hahafahanay mampakatra sary amin'ny tamba-jotra Instagram avy amin'ny Ubuntu ...
Wire, mpanjifa fandefasana hafatra voaaro amin'ny Ubuntu
Tutorial hametrahana Wire. Ity dia mpanjifa fandefasana hafatra miafina na peer-peer ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives azonao ampidirina mora foana.
Xournal, raiso an-tsoratra ireo rakitra pdf ao amin'ny Ubuntu
Tutorial hametrahana Xournal, programa mahafinaritra handraisana naoty sy hanaovana sary an-tsary ireo rakitra PDF avy any Ubuntu.
Hivoaka amin'ny besinimaro i Canonical amin'ity taona ity
Ny CEO vaovao an'ny Canonical dia nanamafy ny fahatongavan'ilay orinasa tao amin'ny Stock Exchange, dingana iray izay iasan'izy ireo ary hifarana amin'ny IPO ...
Mark Shuttleworth: Ubuntu ho an'ny PC Mbola manan-danja amin'ny Canonical
Ny CEO Canonical sy ny mpanorina ny Ubuntu Mark Shuttleworth dia nilaza fa ny Ubuntu ho an'ny PC sy solosaina finday dia mijanona ho tena zava-dehibe amin'ny Canonical.
Ahoana ny fomba hanafenana rakitra sy lahatahiry ao Ubuntu
Fetsy kely amin'ny fomba hanafenana rakitra sy lahatahiry ao amin'ny Ubuntu tsy mila manohana programa ivelany. Soso-kevitra fiarovana tsotra sy haingana ...
Ahoana ny fametrahana Linux Kernel 4.11 amin'ny Ubuntu sy Linux Mint
Fampianarana tsotra misy fanazavana tohatra amin'ny fametrahana Linux Kernel 4.11 amin'ny rafitra fiasa Ubuntu sy Linux Mint.
Termius, safidy mahaliana amin'ny fanaraha-maso lavitra any Ubuntu?
Termius dia fitaovana iray izay nanjary nalaza be tamin'ny asany, saingy tsy kinova maimaim-poana toy ny fampiharana SSH hafa ...
Ahoana ny fametrahana Sublime Text 3 amin'ny Ubuntu sy ny derivatives
Ny endri-javatra sy ny fametrahana ny Sublime Text 3 ao amin'ny Ubuntu sy ny derivatives. Kaody sy mpanonta an-tsoratra lehibe ho an'ny rafitra fiasanay
Ahoana ny fametrahana Popcorn Time 0.3.10
Tutorial hametrahana Popcorn Time 2017 amin'ny kinova 0.3.10 ao amin'ny Ubuntu 2017. Miaraka aminy ianao dia afaka mijery sarimihetsika amin'ny kinova am-boalohany sy amin'ny kalitaon'ny horonantsary avo lenta.
Stacer, safidy iray hafa amin'ny Ccleaner ho an'ny Ubuntu
Famaritana ny zavatra azon'ny Stacer hitazonana ny solo-sainanao Ubuntu. Izy io dia safidy tsara ho an'ny Windows Ccleaner
Discord dia tonga ao amin'ny Ubuntu ary ny format snap
Discord dia fampiharana fifandraisana eo amin'ireo mpilalao lalao video. Fampiharana izay afaka miasa ho toy ny hafatra na VoIP fampiharana ...
Ampidiro ao amin'ny VeraCrypt ny angonao ao amin'ny Ubuntu 17.04
Fampianarana hametrahana Veracrypt avy amin'ny terminal ao amin'ny Ubuntu 17.04 ary hahafahanao manafina ny angon-drakitrao hitazona azy ho voaro amin'ny masonkarenao
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny Ubuntu amin'ny fanjakana niaviany tamin'ny Resetter
Tutorial izay ampahafantarinay ny Resetter. Amin'ity rindrambaiko ity dia azonao atao ny mamerina ny Ubuntu amin'ny fanjakana niaviany nefa tsy mila mamerina na inona na inona intsony.
Ahoana ny fametrahana Ubuntu Tweak sy Unity Tweak Tool amin'ny Ubuntu 17.04
Ubuntu Tweak sy Unity Tweak Tool no fitaovana tsara indrindra amin'ny fanaingoana an'i Ubuntu. Atorinay anao ny fomba fampidinana sy fametrahana azy ireo ao amin'ny Ubuntu 17.04.
Alefaso multreadreading ao Mozilla Firefox ho an'ny Ubuntu
Fampianarana kely momba ny fomba ahafahana mamaky multithreading amin'ny Mozilla Firefox ho an'ny Ubuntu. Fampianarana tsotra sy haingana hampiharina ...
Subiquity, mpiorina Canonical vaovao ho an'ny Ubuntu Server
Mpanamboatra Ubuntu maro no namorona installer vaovao antsoina hoe Subiquity izay nampiasaina tao amin'ny Ubuntu Server, kinova iray izay eo am-pandrosoana ...
Ny kinova isan'andro an'ny Ubuntu 17.10 dia misy izao
Efa mila mitsapa ny kinova isan'andro isan'andro an'ny Ubuntu 17.10 isika, kinova vitsivitsy izay hampiseho amintsika ny kely amin'ny kinovan'ny Ubuntu ho avy ...
Ahoana ny fomba hamonoana ny webcam sy ny mikrô ao amin'ny Ubuntu
Fetsy kely hampihenana ny mikrô sy ny webcam an'ny Ubuntu ary noho izany dia mitandrema sao misy fanafihana malware mety hahatratra ny pc ...
Budgie 10.3 Azo alaina izao; Lazainay aminao ny fomba fametrahana azy amin'ny Ubuntu
Budgie 10.3 dia ilay kinova vaovao an'ny Budgie izay manana fanamboarana bibikely fanta-daza ary mampiasa ny tranomboky GTK3. Lazainay aminao ny fomba hananana izany ao amin'ny Ubuntu
Ahoana ny fametrahana Google Earth amin'ny Ubuntu 17.04
Fampianarana tsotra miaraka amin'ny fanazavana tsikelikely amin'ny fametrahana ny Google Earth 18.0 vaovao ao amin'ny rafitra fiasa Ubuntu 17.04 vaovao.
Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark): Avoahy ny fandaharam-potoana sy ny fiasa vaovao
Ampahafantarinay ny fandaharam-pamoahana sy ny sasany amin'ireo fiasa ho avy ao amin'ny Ubuntu 17.10 (Artful Ardvark), kasaina hatao amin'ny volana oktobra 2017.
Ahoana ny fomba hahatonga an'i Mozilla Firefox haingana kokoa amin'ny Ubuntu
Fetsy kely izay hahatonga ny Mozilla Firefox ho haingana kokoa noho ny teo aloha. Tetika tsy mila programa ivelany na plugins ...
Ny divay 2.0.1 dia misy izao fa tsy amin'ny toerana mahazatra
Wine 2.0.1 no kinova farany an'ny emulator divay malaza. Efa misy io kinova io fa tsy ao amin'ny tahiry mahazatra fa any an-kafa ...
Gnome Shell koa hanana Global Menu
Global Menu dia ho ao amin'ny kinova Ubuntu manaraka ihany noho ny fanitarana ho an'i Gnome Shell, fanitarana izay hatolotry ny Global Menu antsika ...
Ubuntu 17.10 dia hatao hoe "Artful Aardvark"
Ny rafitra fiasa Ubuntu 17.10 manaraka dia ho tonga amin'ny volana oktobra 2017 miaraka amin'ny solon'anarana "Artful Aardvark", izay midika hoe aardvark na oryterope.
Wayland dia ho tonga amin'ny Ubuntu 17.10 ary ho mpizara sary amin'ny fizarana
Tonga any Ubuntu i Wayland. Taorian'ny olana maro dia ho tonga amin'ny Ubuntu 17.10 i Wayland ho mpizara sary tsy miova amin'ny fizarana ...
Mozilla Thunderbird, ilay niharam-boina manaraka tamin'ny fanovana desktop Ubuntu
Nanambara i Ubuntu fa ny andiany manaraka an'ny Ubuntu dia tsy hanana an'i Mozilla Thunderbird ho mpitantana ny mailaka amin'ny fizarana ...
Linux Kernel 4.11 dia azo alaina hatramin'ny 23 aprily
Araka ny naoty fampahalalana iray avy amin'ny Linux Torvalds, Linux Kernel 4.11 dia ho azo alaina amin'ny 23 aprily.
Ahoana ny fanesorana tanteraka ny Unity 8 amin'ny Ubuntu 17.04 Zesty Zapus
Fantatsika izao fa ny Unity 8 dia tsy hivoatra lavitra, maninona no ao amin'ny Ubuntu 17.04? Atorinay anao ny fomba hanesorana azy tanteraka.
Ahoana ny fanovana ny endri-tsoratra ao amin'ny Gnome Shell
Fampianarana kely momba ny fanovana ny endritsoratra amin'ny lohahevitra Gnome Shell na amin'ny Gnome Shell satria mampiasa lohahevitra daholo isika ...
Ahoana ny fanavaozana ny Ubuntu 17.04 avy amin'ny kinova taloha
Lazainay aminao ny fomba fanavaozana ny Ubuntu 17.04. Dingana iray mety ho lava sy sarotra raha tsy fantatsika izany na raha manana kinova taloha kokoa noho ny mahazatra isika
Zavatra tokony hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 17.04
Fampianarana kely momba izay tokony hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 17.04, ny kinova farany an'ny Ubuntu. Tutorial momba ny hetsika fototra aorian'ny fametrahana
Azo alaina izao ny Ubuntu 17.04
Ny kinova vaovao an'ny Ubuntu, Ubuntu 17.04 Zesty Zapus, dia efa misy ankehitriny, kinova izay efa nandrasana fatratra noho ny resaky ny Unity 8 sy Gnome ...
Mark Shuttleworth dia nandimby an'i Jane Silber ho CEO an'ny Canonical
Mark Shuttleworth no ho CEO amin'ny Canonical amin'ny farany, satria nandao an'i Jane Silber izy ary aorian'ny volana tetezamita dia ho lasa mpitarika indray izy
Anbox, rindrambaiko vaovao hampandeha fampiharana Android amin'ny Ubuntu
Te hihazakazaka fampiharana Android amin'ny Ubuntu ve ianao? Vaovao tsara: tonga i Anbox, safidy vaovao tena mahaliana sy matanjaka.
Snap Bundles Tonga amin'ny fomba ofisialy any amin'ny Fedora 24 sy aoriana
Efa mandeha ny fonosana Snap: misy ny fanohanan'izy ireo ao amin'ny Fedora 24 sy ny kinova farany amin'ity fizarana Linux mahafinaritra ity.
Mark Shuttleworth ve dia ho CEO vaovao an'ny Canonical?
Tsy ny Unity 8 ihany no toa manjavona amin'ny Canonical fa misy koa ny resaka momba an'i Jane Silber. Araka izany, toa hanova olona ny CEO an'ny Canonical ...
Ahoana ny fomba hahatonga ny GNOME Shell ho toy ny firaisana
Iray amin'ireo mpampiasa tianao ve i Unity? Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao ny fomba hahatonga ny GNOME Shell hanana sary Unity.
Nanazava tamin'ny antsipirihany ny vaovao momba ny fanovana ny birao i Mark Shuttleworth
Mark Shuttleworth dia niresaka momba ireo fanovana vaovao hitranga amin'ny Ubuntu, mampahafantatra ny ho avin'ny MIR, Unity 7 na Gnome Shell ao amin'ny Ubuntu ...
Red Hat sy Fedora dia miarahaba an'i Ubuntu miverina ao amin'ny GNOME
Tsy ela akory ireo fanehoan-kevitra dia tonga, ary Red Hat sy Fedora faly amin'ny vaovao milaza fa hampiasa ny tontolon'ny sary GNOME indray i Ubuntu.
Ubuntu dia hampiasa ny tontolon'ny sary GNOME indray manomboka amin'ny taona 2018. Tsara!
Vaovao mahafinaritra! Canonical dia nanambara fa handao ny tontolon'ny sary Unity izy ary hanangana indray an'i Ubuntu miaraka amin'ny tontolon'ny sary GNOME.
X.Org 1.19 tonga ihany amin'ny Ubuntu 17.04
Ny toeram-pivarotana ofisialy Ubuntu 17.04 dia efa misy X.Org 1.19, ny kinova farany amin'ity mpizara sary malaza sy manan-danja ho an'ny mpilalao ity ...
Lightworks 14.0, Tonian-dahatsary matihanina, Azo alaina izao; tonga miaraka amin'ny fanovana 400 mahery
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny Lightworks 14.0, tonian-dahatsoratry ny horonantsary matihanina ary ahitàna fampiasa am-polony sy fanatsarana lehibe an-jatony.
Acrobatic Aardvark, ny codename an'i Ubuntu 17.10 dia mety ho tafaporitsaka
Tsy misy tsy ampoizina lehibe, ny anarana Ubuntu 17.10 dia tsy maintsy manomboka amin'ny AA. Ho Acrobatic Aardvark ve izany ho mety ho fitakiana fivoahana?
National Geographic Wallpaper, fampiharana hanatsarana ny Ubuntu
National Geographic Wallpaper dia fampiharana avy amin'ny developer Atareao izay ahafahantsika manome fikitika mahafinaritra ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny fanovana ny valiha ...
OpenShot 2.3, fanavaozana manan-danja indrindra ho an'ny mpamoaka horonantsary hatramin'ny nanombohany
Raha mpampiasa OpenShot ianao, dia ho faly amin'ny fahafantaranao fa tonga ny OpenShot 2.3, ny fanavaozana manan-danja indrindra hatreto ho an'ny mpamoaka horonantsary malaza.
Ny kernel Linux 4.11-rc5 dia azo alaina amin'ny andrana imasom-bahoaka
Nanambara i Linus Torvalds fa misy Linux Kernel 4.11-rc5 ankehitriny ho an'ireo mpampiasa maniry ny hanandrana azy.
Ity ny sary hananan'i Firefox amin'ny faran'ny 2017
Mozilla Firefox dia hamoaka sary vaovao amin'ny faran'ity taona ity ary ity misy pikantsary vitsivitsy izay hampahafantatra anao hoe hanao ahoana izany.
LightDM no ho mpitantana fivoriana vaovao ao amin'ny Linux Mint 18.2
Ny mpitarika ny Linux Mint dia nanambara ny vaovao momba ny Linux Mint 18.2 izay anisan'izany ny fanovana avy amin'ny MDM ho amin'ny LightDM ...
Ahoana ny fomba hijerena horonantsary YouTube tsy misy mpitety Internet na rindranasa fanampiny
Fetsy kely amin'ny fomba hijerena ireo horonantsary Youtube ao amin'ny fampiharana horonantsary, avy any Ubuntu avokoa ary tsy misy plugins na mpizaha tranonkala fahatelo ...
Ny fahalemena vaovao dia miseho ao amin'ny kernel Linux ho an'ny Ubuntu
Ny fahasamihafana vaovao dia nipoitra tao amin'ny kernel Linux ampiasain'ny Ubuntu. Ireo vahaolana marefo ireo dia efa voavaha saingy atahorana ...
Vivaldi 1.8 manova ny tantara fitetezana ao Ubuntu
Ny kinova Vivaldi vaovao dia nanova ny tontolon'ny fitetezana tranonkala miaraka amin'ny kalandrie vaovao sy ny asan'ny Web Browsing History ...
Ahoana ny fomba hizarana fifandraisana Internet amin'ny Ubuntu
Fampianarana kely momba ny fomba hizarana ny fifandraisana Aterineto ao amin'ny Ubuntu sy ny tsirony ofisialy, tsy mila lakile wifi sy fifandraisana misy tariby fotsiny.
Ahoana ny fametrahana Mesa 17.0.2 amin'ny Ubuntu 16.04 LTS
Atorinay anao ny fomba fametrahana ireo mpamily sary farany indrindra avy amin'ny tranomboky Mesa 17.0.2 ao amin'ny rafitra Ubuntu 16.04 LTS sy Ubuntu 16.10 anao.
Raiso maimaimpoana ireo rindrambaiko Ubuntu 17.04 vaovao
Ireo efa nandresy tamin'ny fifaninanana rindrambaiko Ubuntu 17.04 dia efa fantatra. Ireo wallpaper ireo dia azo ampiasaina amin'ny Ubuntu ...
Ny LXLE 16.04.2 dia mampanantena fa ho ny kinova farany tsara amin'ny fizarana hatreto
Ny RC an'ny LXLE 16.04.2 dia misy ankehitriny, kinova izay mifototra amin'ny Ubuntu 16.04.2 LTS fa misy fanovana vitsivitsy ho an'ny solosaina tsy manana loharanom-pahalalana firy ...
Ahoana ny fomba hitehirizana ny fampahalalana momba ny finday Android ao Ubuntu
Fetsy kely amin'ny fomba fanaovana kopia backup an'ny finday Android avy amin'ny solosainantsika miaraka amin'ny Ubuntu, fitaka tsotra sy haingana tsy misy fampiharana ...
Ireto ny sasany amin'ireo fiasa vaovao amin'ny tsiro ofisialy Ubuntu 17.04
Ny tsiro ofisialy Ubuntu 17.04 dia efa manana beta farany. Ity beta ity dia mampiseho amintsika antsipiriany vitsivitsy sy vaovao izay ho azon'izy ireo ao amin'ny kinova manaraka ...
GNOME 3.24 dia misy izao ary ireto ny vaovaony
GNOME 3.24 dia miaraka amin'ny fanatsarana maro izay hanamarina ny fifindra-monina an-tsokosoko ny fampiharana mahazatra an'ity birao ity amin'ny tontolo vaovao.
Ubuntu 17.04 dia efa manana ny Beta Farany
Tapitra ny fivoaran'ny Ubuntu 17.04. Androany no nanombohana ny beta farany, beta izay tsy eo nefa vaovao be koa ...
Netflix dia efa miasa ao amin'ny Mozilla Firefox tsy misy fanampiana
Netflix dia efa miasa miaraka amin'i Mozilla Firefox. Nanavao ny atiny sy ny asany ilay mpitety tranonkala malaza mba hahafahan'ny Netflix ampiasaina tsy misy fika ...
Classifier, rindranasa iray handaminana kokoa ny fisie ataonay
Ny fako nomerika dia olana iray misy fiatraikany amin'ny Ubuntu ihany koa. Saingy amin'ny programa Classifier dia afaka mandamina sy manadio ny Ubuntu amin'ny fomba mora isika
Ny anaram-bosotra Ubuntu 17.10 dia hanomboka amin'ny litera a
Ubuntu 17.10 dia afaka manohy ny fomban-drazan'ny litera abidia. Araka izany, Ubuntu 17.10 dia hanana anaram-bosotra miaraka amin'ny litera A ...
Ahoana ny fomba famoronana fanairana fanaingoana ao amin'ny fampiharana Battery Monitor
Ny kinova vaovao an'ny Monitor Monitor 0.5 dia mamela ny famoronana fampandrenesana manokana ao amin'ilay fitaovana araky ny fanjakana samihafa.
Ahoana ny fomba hanaovana Ubuntu MATE hanana ny sary Linux Mint
Mpampiasa Ubuntu MATE ve ianao? Ary tianao ve ny rafitra fiasanao hanana sary mitovy amin'ny Linux Mint? Atorinay anao ny fomba ahazoana azy.
Aptik, fitaovana tsara hanamboarana sy hamerenana ireo nomaniny ho solon'izay ao amin'ny Ubuntu
Te-hamerina handoa ny angon-drakitrao sy ny toe-javatrao ve ianao? Aptik dia rindrambaiko tena mahomby izay mamela anao hanatanteraka ireo asa ireo amin'ny Linux.
Canonical dia namoaka programa fikojakojana na serivisy vaovao antsoina hoe Ubuntu 12.04 ESM, programa iray hitazona ny fanohanana Ubuntu 12.04 ...
Fampianarana kely momba ny fomba hananana ao amin'ny Lubuntu na ny Ubuntu misy anay LXDE dock amin'ny birao kely nefa miasa izay manampy antsika isan'andro ...
KSmoothDock, safidy tsara hafa raha mitady dock Plasma vaovao ianao
Raha mampiasa Plasma 5 ianao ary te hampiasa dock amin'ny fahatsapana hafa, KSmoothDock dia mety ho ny safidy tadiavinao.
Ahoana ny fomba ahafahan'ny plugin NPAPI ao amin'ny Firefox 52
Mozilla Firefox 52 dia manomboka mametra ny fampiasana plugin NPAPI, saingy miteraka olana vitsivitsy izany. Lazainay aminao ny fomba hamahana ireo olana ireo ao amin'ny Firefox
Mahafantatra Todo.txt famantarana
Ny fitantanana ireo lisitry ny lahasa mahazatra noforonin'i Todo.txt dia mahazo fanampiana lehibe avy amin'ny tanan'ny ...
Ny resipeo GNOME dia azo alaina ao amin'ny Ubuntu 17.04 Zesty Zapus
Tianao ny mahandro? Vaovao tsara: ny resipeo GNOME, rindrambaiko resahina ho an'ny Linux, dia azo apetraka ao amin'ny Ubuntu 17.04 Zesty Zapus.
Meteo Qt dia mamela anao hijery ny toetr'andro ao anaty lovia
Ianao ve mitady rindrambaiko mamela anao hanamarina ny toetr'andro avy eo amin'ny bara ambony? Raha izany dia Meteo Qt no tadiavinao.
Ubuntu mandefa indray ny tranokala Ubuntu Tutorials, tranokala fanampiana ho an'ny mpampiasa Ubuntu rehetra
Ubuntu Tutorials dia tranokala fianarana Ubuntu vaovao, tranokala mifantoka amin'ny ambaratonga rehetra izay hampianarana ny olona hampiasa Ubuntu ...
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny tokony hatao izahay raha tsy afaka mamaky kapila mafy na pendrive ny Ubuntu PC anao.
Azo atao izao ny Snapd 2.23, misy ny fanohanana an'i GalliumOS sy Linux Mint
Snapd 2.23 dia azo alaina amina fampidinana sy fametrahana ankehitriny ary miaraka amin'ny fanampiana vaovao lehibe ho an'ny rafitra fiasa vaovao.
Canonical dia ao amin'ny Google Next 2017
Canonical dia handray anjara rahampitso amin'ny hetsika Google Next 2017, iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra mifandraika amin'ny cloud teknolojia sy ireo orinasa mifandraika ...
Ahoana ny fametrahana fonosana AppImage ao Ubuntu
Fampianarana kely momba ny fametrahana paosy miaraka amin'ny extension AppImage ao amin'ny Ubuntu, na inona na inona kinovan'ny Ubuntu ananantsika ...
Gnome Pomodoro, fampiharana mahasoa hampitomboana ny vokatra eto Ubuntu
Gnome Pomodoro dia iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra ao amin'ny Gnome hampiasa ny teknikan'i Pomodoro, ity fitaovana ity dia azo apetraka amin'ny Ubuntu ...
Peruse dia mpamaky tantara an-tsary ho an'ny Kubuntu izay azontsika apetraka ivelany ary manao komika nomerika sy famakiana hafa tena tsara ...
Atorinay anao ny fomba fametrahana sy fampandehanana ny programa Photoshop CC ao amin'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny fitaovana PlayOnLinux haingana sy mora.
System76 dia nanambara ny fahatongavanà solosaina finday vaovao miaraka amin'i Ubuntu. Ity ekipa antsoina hoe Galago Pro ity dia hanana fitaovana saika mitovy amin'ny macbook retina ...
Ahoana ny fomba hanampiana tsoratadidy mavitrika ao amin'ny Mozilla Firefox
Fampianarana kely momba ny fampiasana tsoratadidy mavitrika ao amin'ny Mozilla Firefox ary hialana amin'ny fampiasana fampiharana toa ny Feedly ...
Canonical sy Dell dia manolotra ny Dell Edge Gateway 3000 miaraka amin'ny Ubuntu Snappy Core
Nandritra ny MWC 2017, Canonical sy Dell dia nanolotra ny Dell Edge Gateway 3000, fianakaviana misy vavahady ampiasain'ny Ubuntu Snappy Core ...
Twitter Plasmoid, famenony tonga lafatra ho an'i Kubuntu
Twitter Plasmoid dia plugin kely ho an'ny Kubuntu izay mitondra ny fiasa Twitter fototra amin'ny birao KDE ...
Ahoana ny fametrahana Linux Kernel 4.10 amin'ny Ubuntu 16.04 LTS sy Ubuntu 16.10
Tamin'ny famoahana ny kernel Linux 4.10 tato ho ato, asehonay aminao ny fomba fametrahana azy amin'ny rafitra Ubuntu 16.04 LTS sy Ubuntu 16.10.
Nautilus 3.24 dia ho hita ao amin'ny Ubuntu 17.10
Nautilus 3.24 no ho ilay kinova lehibe mahatratra ny Ubuntu 17.10, ilay kinova vaovao izay hipetraka amin'ny solosaintsika amin'ny volana oktobra ho avy ...
Ubuntu dia hanana fiarovan-doha Augmented Reality
Ubuntu koa dia hanana fiarovan-doha Augmented Reality, ity fitaovana ity dia haseho amin'ny MWC manaraka ao Barcelona ...
Arkas OS, distro vaovao miorina amin'ny Ubuntu ho an'ny mpanakanto
Arkas OS dia fizarana vaovao mifototra amin'ny Ubuntu ary mikendry ny hanampy ny mpampiasa amin'ny lahasa famokarana atiny ...
Ahoana ny fanovana ny anaran'ny mpampiantrano ao amin'ny Ubuntu 16.04
Fampianarana kely momba ny fanovana sy fahalalana ny vaovao mifandraika amin'ny anaram-bosotra an'ny Ubuntu, na amin'ny tambajotram-bahoaka na tsy miankina izany ...
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny Ubuntu 16.04.2 LTS
Canonical dia nandefa tamin'ny fomba ofisialy ny Ubuntu 16.04.2 LTS ary manome ireo rohy hisintona ireo sary ofisialy rafitra.
Rclone snap pack misy
Manolotra ny fomba fampidirana am-pilaminana ny fampiharana Rcloud amin'ny endrika snap ao anatin'ny rafitra fiasa Ubuntu ianao.
Ahoana ny fomba hananana Menu eran-tany ao amin'ny Ubuntu Mate noho ny Vala Panel AppMenu
Fampianarana kely momba ny fametrahana Vala Panel AppMenu, fampiharana ahafahantsika manana ny menu ivelan'ny fikandrana fampiharana ...
Ahoana ny fametrahana Firefox Nightly amin'ny alàlan'ny fonosana flatpak
Torolàlana kely momba ny fametrahana Firefox Nightly amin'ny alàlan'ny fonosana Flatpak, zavatra mahaliana nefa azo ampiharina amin'ny mpamorona sy mpampiasa sasany ...
AppCenter, OS fototra dia miomana hanatsara ny fivarotana azy manokana
Ireo mpamorona OS Elementary dia miomana ny hanampy fanovana amin'ny fivarotana fampiharana, AppCenter, mba hahazoam-bola ny mpamorona.
Chuwi Hi13, fandrahonana ho an'ny Microsoft's Surface ho an'ny $ 369 ary mifanaraka amin'ny Ubuntu
Raha tianao ny Microsoft's Surface dia faly ianao mahafantatra fa ho avy tsy ho ela ny Chuwi Hi13, fitaovana mitovy amin'ny vidiny ambany kokoa.
UKUI ity, tontolo misy sary ho an'ny Linux miorina amin'ny Windows 7
Te hiara-hiasa amin'ny mpampiasa interface toa Windows 7 amin'ny Linux ve ianao? Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny tontolon'ny sary UKUI izahay.
Nahazo fonosana Ubuntu Snap ny sehatra an-trano Smart Source
Ny fonosana snap Ubuntu ihany koa dia mahatratra trano mahomby amin'ny alàlan'ny fisehoany amin'ny sehatra malalaka open source openHAB.
Ahoana ny fomba hanampiana Slingscold amin'ny Ubuntu
Torolàlana kely momba ny fametrahana sy fampidirana ilay mpandefa rindrambaiko slingscold ao amin'ny biraon'ny Unity na ao amin'ny plank dock ...
Ubuntu 16.04.2 dia mijaly lagika vaovao. Ho tonga amin'ny Alatsinainy ve izany?
Lag lagy Ubuntu 16.04.2 vaovao. Izay nandrasana tamin'ny andro faha-2 tany am-boalohany ary nahemotra ho amin'ny andro faha-9, dia toa ho tonga amin'ny 13 Febroary ihany izany.
5 Ubuntu Unity dia mety tsy ho fantatrao
Ny biraon'ny Unity dia manana lafin-javatra mahaliana momba ny tontolo iainana. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao hoe iza amin'ireo endri-javatra tsy dia fantatra loatra amin'ny Unity.
Microsoft's Surface Pro 4 mihazakazaka Ubuntu 16.04 LTS [Video]
Mitady takelaka Ubuntu tonga lafatra ve ianao nefa tsy mahita? Angamba io takelaka io dia ilay Surface Pro 4, araka ny asehon'ity horonantsary ity.
Te hahita sary panoramic 360º ao amin'ny Ubuntu ve ianao? Atorinay anao ny fomba fanaovana azy amin'ny fampiasana ity plugin tsotra ity ho an'ny Eye of GNOME
Ny terminal terminal Ubuntu dia azo alamina tanteraka. Azonao atao ny misafidy ny fanovana ny mangarahara na ny endritsoratra mankany amin'ny fandefasana tarehintsoratra manokana.
Komorebi dia mamela antsika hampiasa background animated amin'ny PC misy Ubuntu
Te hampiasa fiaviana mihetsika amin'ny Ubuntu ve ianao? Azo atao izany noho i Komorebi, programa mahaliana izay ianaranao ny zavatra rehetra amin'ity lahatsoratra ity.
Ahoana ny fomba hanafenana rakitra sy lahatahiry tsirairay nefa tsy mila anarana
Te hanafina rakitra na lahatahiry tsirairay ao amin'ny Linux ve ianao ary tsy te-hanome anarana azy intsony? Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana azy.
Ny takelaka dia nohavaozina manamboatra olana amin'ny Ubuntu 16.04
Screenlets, rindrambaiko mamela antsika hanana widgets amin'ny Linux, dia novaina tamin'ny fanitsiana ireo olana izay niainana tao amin'ny Ubuntu 16.04.
Ahoana ny fomba hampiasana ny interface LibreOffice 5.3 Ribbon ao Ubuntu
Leo ny sary LibreOffice? Ny v5.3 dia ho tonga amin'ny safidy vaovao hahafahantsika manova ny interface ho Ribbon. Mendrika.
APT Update Indikator, fanitarana izay hampandre anao rehefa misy fanavaozana APT
Te hahafantatra eo noho eo ve ianao rehefa misy fanavaozana APT? APT Update Indikator dia applet kely izay hanao ny asa rehetra ho anao.
Mamorona script anao manokana amin'ny alàlan'ny bash
Ianaro ny fomba hamoronana script bash anao mba hamerenany ny asany, hanatsorana ny syntax baiko, ary hanafoanana ireo fihetsika miverimberina amin'ny alàlan'ny masontsivana mandalo.
Canonical's Mir dia efa manana fahazoan-dàlana LGPL
Canonical sy ireo mpamorona Ubuntu dia nanao fanovana lehibe tamin'ny MIR, ny tena manan-danja indrindra amin'izany dia ny fahazoan-dàlana mpizara sary LGPL ...
Navoaka i Calligra 3.0
Miaraka amin'ny kinova 3.0 an'ny Calligra novolavolaina tamin'ny fampiasana ny rafitra KDE sy Qt5 dia miantoka ny fitazonana hatrany ny suite.
Symmetric crypto ho safidy manokana
Misy ny finoana diso fa ny cryptography symmetric dia malemy kokoa noho ny lakilen'ny besinimaro, eto isika dia mamakafaka ny fiasan'ity endrika encryption ity
Canonical dia manolotra fiofanana amin'ny alàlan'ny Ubuntu Tutorials
Canonical dia mandefa fampianarana kely ho an'ny fianarana mahaleo tena amin'ny famoronana Snaps amin'ny Ubuntu Core, amin'ny alàlan'ny tranokala Ubuntu Tutorials.
Ahoana ny fametrahana Libreoffice 5.3 amin'ny Ubuntu 16.04 amin'ny fampiasana fonosana haingana
LibreOffice 5.3 no kinova farany an'ny LibreOffice, kinova izay azonay apetraka amin'ny Ubuntu 16.04 noho ny fisintomana ...
Ubuntu 16.04.2 dia nihemotra tamin'ny 9 feb noho ny glitch kernel lehibe
Raha miandry ny famoahana ny Ubuntu 16.04.2 ianao dia mila manana faharetana bebe kokoa. Nahemotra amin'ny 9 febroary ny famotsorana azy.
Afaka mankafy fonosana haingana ao amin'ny Ubuntu 14.04 isika izao
Ubuntu 14.04 izao dia afaka mampiasa fonosana haingana noho ny fanavaozana sy ny fametrahana programa sasany izay ao amin'ny trano fitahirizana ...
Fampiharana KDE maromaro no tonga amin'ny endrika snap Ubuntu
Mpanamboatra KDE maro no nandefa tranomboky sy fampiharana KDE ho an'ny format snap, endrika iray toa ny birao KDE iray manontolo no handray ...
Canonical dia manambara LXD 2.8 Pure-Container Hypervisor ho an'ny Ubuntu 16.04 sy 14.04
Canonical dia manambara ny kinova vaovao an'ny LXD 2.8 Pure-Container Hypervisor, azo alaina ao amin'ny Ubuntu 16.04 LTS sy Ubuntu 14.04 LTS.
Ubuntu 2 Alpha 17.04 misy izao
Azo zahana izao hizaha toetra ny Alpha 2 an'ny Ubuntu 17.04, kinova izay mampiseho amintsika ny vaovao hananan'ny fizarana mifototra amin'ny Ubuntu 17.04
Ny MATE Dock Applet dia mahatratra ny kinova 0.76 ary efa azo sintonina izao
Azonao atao izao ny MATE Dock Applet v0.76 ho an'ny rafitra fiasa mifototra amin'ny Linux, ary koa ho an'ny Ubuntu MATE izay ahatongavany ho azy.
Ubuntu-app-platform, tetika mahaliana iray mba hamonjy toerana ao anaty fonosana haingana
Ubuntu-app-platform dia fonosana vaovao hamaha ny olan'ny fiankinan-doha rehetra ary hamorona fonosana kely dia kely ...
KeePassXC, ny fomba fametrahana an'ity mpitantana teny miafina ity amin'ny Ubuntu
Mitady mpitantana tenimiafina tsara ho an'ny Ubuntu? Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fametrahana KeePassXC, safidy iray tsy hadino.
Ahoana ny fametrahana Remmina 1.2 amin'ny Ubuntu 16.04 LTS amin'ny fomba tsotra
Ampianarinay ianao hametraka ny rindranasa Remmina amin'ny rafitra Ubuntu 16.04 LTS amin'ny fomba tsotra amin'ny alàlan'ny snaps mety.
Ahoana ny fomba hanampiana fihetsika multi-mikasika Mac amin'ny PC PC-nao
Te hampiasa fihetsika multi-mikasika macOS (OS X) teo amin'ny Ubuntu ve ianao? Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manazava izay rehetra tokony ho fantatrao.
Ahoana ny fametrahana ny birao malaza indrindra ao Ubuntu
Ny zavatra tsara indrindra momba ny Linux dia ny ahafahantsika manova ny interface misy azy amin'ny baiko vitsivitsy. Atorinay anao ny fomba fametrahana ireo birao malaza indrindra ao Ubuntu.
Google Play Music Desktop Player, mpilalao tsy ofisialin'ny Google Play Music
Iray amin'ireo mpampiasa mampiasa Google Play Music ve ianao? Amin'ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny Google Play Music Desktop Player tsy ofisialy izahay.
Kernel 4.10 dia azo alaina ao amin'ny Ubuntu Zesty Zapus
Ny kinova farany an'ny Ubuntu Zesty Zapus dia efa afaka nametraka kernel 4.10 tao amin'ny Ubuntu, fa mba hitsapana azy fotsiny amin'ny virtoaly ...
Ubuntu 16.04.2 dia ho tonga amin'ny volana febroary ho avy izao
Ubuntu 16.04.2 dia mbola tsy navotsotra, ny zavatra toy izany dia hitranga amin'ny 2 Febroary noho ny olana amin'ny famoahana sy fanampiana farany ...
Ubuntu dia manome dolara an-tapitrisany amin'ny Dell mpivarotra
Dell dia nanangana solosaina finday avo lenta vaovao miaraka amin'i Ubuntu saingy nanambara ny vola azony tamin'ny fampiasam-bola $ 40.000 ...
Ahoana ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny sarinay (ary ny fisie hafa) voafafa tamin'ny PhotoRec
Efa voafafa tsy nahy ny sary tianao tadiavina? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana azy amin'ny fampiasana Photorec (Testdisk).